Motion Graphics eji video ma ọ bụ na-aga aga ike na nro nke ngagharị, ma n'ezie iwere anya na mmepe nke omume dị ka Mgbe mmetụta na-eme ka eke a ịke nke na-aga aga pụtara n'ụzọ kwụ ọtọ. N'ihi na nke ewu ewu na nke ngagharị ndịna-emeputa ọtụtụ ndị chọrọ ịhụ ihe na-aka, ya mere, ka nwere a lee anya na isi echiche.
Emeghe a ọhụrụ mejupụtara, ojiji ọ bụla mkpebi ntọala ị chọrọ na-arụ ọrụ na, na mgbe ahụ ike a ndabere oyi akwa maka oru ngo iji Layer> New> Solid, na ị chọrọ ịhọrọ a mma egbuke egbuke na agba n'ihi na nke a otú ahụ na-aga aga niile guzo.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe nke a dị ka na-amalite mgbe n'ihi na gị na oru ngo.
2. na-eke gị udi
N'ihi na nke a Motion Graphic m na-aga na-eke a obi ụtọ na mgbe ahụ ndụ ya. Udi ngwá ọrụ ya onwe ya bụ n'elu menu, ndabara bụ ejikari a square, ma pịa ma jide ya na ị nwere ike họrọ site ọzọ shapes dị. I nwekwara ike iji na Q shortcut ime nke a.
M họọrọ otu ellipse ebe a, ị nwere ike họrọ ngwá ọrụ wee pịa na mejupụtara na ịdọrọ si a udi ma ọ bụrụ na ị chọrọ, Otú ọ dị a ngwa ngwa shortcut bụ nanị Ugboro abụọ pịa ngwá ọrụ icon mgbe ọ na-atọrọ ka gị chọrọ udi, ọ ga- akpaghị aka ike a udi zuru size nke mejupụtara na kpọt. Nke a na-nwere abamuru nke na-eme ka arịlịka mgbe n'ihi na ihe etiti nke etiti, nke nwere ike, na-adabere na ị na-aga aga echiche,-bara uru.
Ọzọ atọ mgbe arụ ọrụ na shapes bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ a zuru okè gburugburu, ị nwere ike na-amalite na ellipse, na-aga size onwunwe nke ihe, na alt pịa agbụ akara ngosi maka ịrịọ n'ike-n'ike, ọ na-akpaghị aka na-eme ka ịdị elu na obosara otu ihe. N'ihi na ihe ellipse, nke a pụtara na ọ ntabi-aghọ a gburugburu.
Mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ikpe nke ukpụhọde size ona, anyị na-emecha na-aga ike a bouncing bọl na-aga aga otú o kwesịrị ịbụ nnọọ a bit nta.
Ya mere ugbu a anyị nwere anyị obi ụtọ, dị njikere izubandu.
3. ndụ na obi ụtọ
Na ngagharị ndịna-emeputa, e nwere mgbe nza nke obere ọcha nke ije na ya na-eme ka ihe na-adị mfe na-eso anyị nwere ike ime ka ọrụ anyị ebe maka onye ọ bụla mmewere nta. The bouncing bọl bụ n'ezie nanị-aga na-a obere usoro nke ihe 4 sekọnd, nke anyị nwere ike mgbe ahụ dị nnọọ ikwugharị (akaghị) Ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ya mere, anyị nwere ike ịtọ oge cursor 4 sekọnd na pịa N na keyboard na anyị na ike ọrụ anyị ebe site na mmalite na anọ nke abụọ a. Ị nwere ike izubandu gị oru ngo-enweghị ihe a nzọụkwụ N'ezie, ma ọ dịghị eme ka ahazi ihe a obere mfe.
Ugbu a, mgbe ndụ gị mkpa n'ezie ka atụmatụ ihe ị chọrọ ime tupu ị malite, ọ dịkarịa ala a echiche bụ isi. Lee, m chọrọ na obi ụtọ na-abịa site anya n'elu nke ihuenyo na ibiaghachi. Ihe mbụ m na-eme bụ ime ka usoro iheomume banyere atọ n'ụzọ anọ nke a nke abụọ, megharia bọl gbadaa kasị ala mgbe m chọrọ ịga, na ike a keyframe site na ịpị elekere nkwụsị na-esote ọnọdụ.
Ọzọ, m na-aga azụ mmalite na setịpụrụ m mmalite mgbe n'ihi na na obi ụtọ anya ihuenyo. Iji hụ na ọ tụlee ekwesị, n'ihi ya, ị jide nnofega dị ka ị ịdọrọ ihe na òké (a gbachiri ndị x axis n'ihi ya, ọ na-akpali ke otu ụgbọelu), ma ọ bụ jiri ọnọdụ ụkpụrụ ka ịhazie ụkpụrụ maka otu axis naanị.
Ugbu a na i nwere obi ụtọ na idobe n'ime ihuenyo na ọkụkụ ndị larịị anyị ẹkedọhọde n'ala. Ugbu a, anyị mkpa iji melite ibiaghachi. Ya mere, anyị na-enwe ọganihu usoro iheomume ọzọ karịrị anyị mbụ keyframe, ọzọ atọ n'ụzọ anọ nke a abụọ ma ọ bụ otú ahụ, ọ bụghị ihe dị kpọmkwem sayensị, na-ahụ ihe arụ ọrụ kasị mma ebe a. Ugbu a, anyị ike anyị atọ ọnọdụ. Ugbu a dị ka a na-achị nke mkpịsị aka, n'ihi na ndị kasị mma mmetụta ihe kwesịrị ibiaghachi ebe n'etiti a atọ a ọkara nke mbụ ya elu, n'ihi ya, anyị egosiputa anyị obi ụtọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na nke a keyframe.
O doro anya na ihe na-aga, ga-abịa ala, dị ka na-esote aga bụ azụ ala ka n'ala ọzọ. Iji hụ na ị nwere kpọmkwem otu ebe dị ka Tupu ị nwere ike mfe oyiri na akpa n'ala keyframe anyị na mado ya n'ime usoro iheomume n'ebe ọ bụla na cursor bụ.
Ugbu a anyị nwere isi anyị na-aga aga, anyị obi ụtọ tụlee n'ime ihuenyo, bounces ozugbo na ala.
4. ukpụhọde na-aga aga
Ọ bụ ezie na anyị nwere anyị ije, ọ na-adịghị enye mmetụta nke a bouncing obi ụtọ, dị ka ọ na-akpali nnọọ uniformly si n'elu ebe ọzọ. Iji nyere aka ebe a anyị nwere ike họrọ niile 4 keyframes, nri pịa ma họrọ Easy Mfe si keyframe nnyemaaka, nke a adjusts ọsọ nke ije n'etiti pints maka ihe ụtọ ngagharị.
Otú ọ dị, anyị nwere ike nụchaa a ọbụna n'ihu site na iji eserese ngwá ọrụ.
Ugbu a, eserese nwere ike igosi na ọtụtụ dị iche iche Njirimara, dị ka anyị na-elekwasị anya ebe a na-agba nke ije, anyị họrọ Dezie Speed ​​e sere ese nhọrọ
Ọ bụ ezie na ebe anyị na-elekwasị anya na ọsọ, a Usoro nwere ike etinyere ọ bụla àgwà na i nwere ike ime mgbanwe iji gị animations ebe a maka mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla.
M ịgbanwe ọsọ akụkụ ebe a na-agbalị na ike a sere n'elu ụdị mmetụta site selata ije na onye ọ bụla elu isi na a ngwa ngwa ije na 'ibiaghachi' onwe ya. Ị kpatụ grafụ-abụ nanị ịpị na-adọkpụpụta.
Ugbu a, m bọl na gbapụrụ ọsọ elu na ibiaghachi, na ụdị floats a obere na akwa mgbe tupu idobe ala ọzọ. Bụghị ihe ezi uche ma na-anya m ya anya mma.
5.-agbakwụnye na udi ije
Otu n'ime ihe banyere ngagharị ndịna-emeputa bụ mkpa ka ị egbeokwu maka mmetụta, anyị mere nke a na ije ọsọ, ma na obi ụtọ mụ kpebisiri otu zuru okè gburugburu ofụri ya njem. Anyị nzọụkwụ ọzọ bụ nwere ya gbatịa a obere ka ọ gbapụrụ ọsọ nsoroụzọ ala, na skwọsh a obere ka ọ akụrisị n'ala, na-agbakwunye nke a na dị na-eme usoro ndị ọzọ ẹnamde anya, na gbatia na squash bụ n'ezie a staple nke na-aga aga-ajụ kpomkwem n'ihi nke a.
Akpa oyi anyị na-ekpebi ebe obi ụtọ ga-enwe nnọọ gburugburu na njem ya, na ike anyị keyframe n'ebe ahụ maka size onwunwe. M kpebiri na m n'elu ibiaghachi, ma ọ pụrụ ịbụ na ebe ọ bụla ị chọrọ n'ezie.
N'ihi na ebe a anyị ga-achọ ka dakọtara udi mgbanwe ibiaghachi keyframes a ọma n'ọnụ ebe a bụ daa niile oyi akwa Njirimara na pịa U na keyboard. A na-ekpughe naanị ndị na-Njirimara na a keyframe-arụsi ọrụ ike (wee jide n'aka na ị na-a size keyframe tupu). Nke a de-clutters usoro iheomume na dị nnọọ na-eme ka ọrụ usoro a obere mfe.
Ọzọ ọ bụ a ikpe nke na-eke keyframes maka ebe ị chọrọ agbatị obi ụtọ, na ebe ị chọrọ squashed obi ụtọ, na-eji cop na mado na-etinye ha na nri tụrụ, na nnwale a bit ruo mgbe ị ga-esi mgbanwe-amasị gị. Ị mepụtara ahụ n'ezie deformation site unchecking na Constrain n'ike-n'ike na akara ngosi na size onwunwe na mgbe ahụ dị nnọọ na-agbanwe agbanwe akpọnwụ ndị x ma ọ bụ y ndagwurugwu na-mmetụta ị chọrọ.
Nke a na-agbakwụnye na echiche nke ngagharị nke dị oké mkpa maka ngagharị ndịna-emeputa, ma ọ bụ, dị ka ije, a obere linear, otú ọzọ anyị nwere ike họrọ ha niile, na-aga keyframe nnyemaaka na mgbe ahụ Easy ala ka larịị mgbanwe.
Ugbu a doro anya na nke a bụ nnọọ isi na-aga aga, ma ụkpụrụ ịnọgide otu ihe ahụ niile ngagharị ndịna-emeputa, ị nwere ike itinye agba na agba mgbanwe, na-eji dịgasị iche iche nke mmetụta n'ime Mgbe mmetụta, na Ịme anwansị nhọrọ nke urughuru mmetụta dị nnọọ ewu ewu na Motion Graphics , were gabazie.
M olileanya na onye ọ bụla na chere echiche karịrị ha pụrụ ịhụ na ọ bụ n'ezie a bụrụ na nke na-arụ ọrụ site ọ bụla ije na ikwe ka Mgbe mmetụta na-arụ ọrụ n'ihi unu, ngagharị ndịna-emeputa bụ fun, otú na-eke ha.
> Resource> Video> Olee otú Mepụta Motion Graphics na Mgbe mmetụta